China Yakagadzirwa OEM European And American Seamless Tight-Fitting Yoga Sutu Zviviri-Piece Mukadzi Runako Kumashure Mitambo Vest Slim High-Waist Fitness Pants vagadziri uye vatengesi | Delvis
Yakarukwa Yoga Sutu
Kubatanidza Yoga Zvipfeko
Yakagadzirwa OEM yeEuropean neAmerican Seamless Tight-Yakakodzera Yoga Sutu Zviviri-Zvidimbu Zvechikadzi Runako Kuseri Mitambo Vest Slim Yakakwira-Waist Fitness Pants
Item nhamba: DWSLLTZ4535
Kuumbwa kwemucheka: 65% naironi + 25% polyester + 10% spandex
Edition mhando: tight
Elasticity: Super elastic
Yakapfava: Pakati nepakati
Ukobvu: pakati nepakati
Fabric basa: jira remhando yepamusoro, kufunga rebound, kukurumidza kuomesa uye kufema, tsono ina uye tambo nhanhatu.
Tichitarisa pakurovedza muviri kwakasimba, takazvipira kuunza tsigiro yakapfava uye yakasimba-yakasimba kune vanovaka muviri. Zviri nani uye zviri nani kuvhara simba. Zvirinani kunyura mwando chiitiko chiri pamusoro peBR. Kukutungamirira iwe kuvhura nzira itsva ye-high-intensity exercise comfort.
Professional level kusimba, kuderedza uremu, kuumbika kwemuviri, kudzidziswa, kumhanya, mijaho yemabhiza uye vamwe vanofarira zvemitambo zvine mutsindo, varairidzi vekusimba, vatambi nevamwe vanoita zvemitambo.
Nzira yekugadzira: Kudzora kwakasimba kweyepasirese yakakwira mwero, kunyatso kuyera, kusona chaiko, yakakwirira-chaiyo yekucheka muchina, chaiyo wiring
Yakakwira elasticity uye kusimba, dumbu uye chiuno kugadzirisa, chiuno chakapfava, chic dhizaini
Inogadzikana uye inofema, yakanaka gomba uye inofema hudyu-inosimudza leggings, mitambo haina kurambidzwa, uye muviri mutete uye une simba.
Kunaka kwejacquard isina musono kunowedzera hunhu hwako
Tsanangudzo yechigadzirwa, dhizaini yetsoka, kuputira zvinyoro, kugadzika kwakaringana, shandura zvitsitsinho zvidiki, kurebesa mitsara yemakumbo
Yakafara elastic yakakwira chiuno Pakati-yakakwirira chiuno chiuno chitete, yakakwira-elastic yepedyo-yakakodzera jira Mid-yakakwirira screw waist seal dhizaini
Rega ganda rako rifeme zvakasununguka. Iyi yoga muviri 7-point raibhurari inokodzera chero mhando yemuviri. Iyo yakasarudzika yekusona dhizaini inotarisana nekunaka kwema curves evakadzi. Yakanyanya elastic uye yakagadzika kupfeka, uye chimiro chinoratidza curve yakakwana!
3D curved curve, yakatwasuka peach matako, gomba process, inofema uye isinganamate, diagonal streamline tailoring, hapana chikonzero cheP-mifananidzo, kune supermodel makumbo.
Makumbo akatetepa akatwasuka Kukwenenzverwa kukwenenzverwa kukwenenzverwa Makumbo akatambanudzwa Mahudyu akasimba Mahudyu matatu ane mativi matatu akakombama.
Kupfeka mushwi, kusonwa kusina musono kwemachira anounzwa kunze kwenyika kusimudzira kuita kwemitambo
Usazembera chiuno kana nyama, usadonha kubva pagoko
Kufema mesh sangano Sexy matako akasimudza matako saizi mesh, akasununguka uye anofema kutambanudza makumbo
Mufananidzo modhi Kureba: 178cm Kurema: 54kg Bust: 83cm Chiuno: 62cm Hip: 93cm Edza pahukuru: M Edza pane ruzivo: Fit
Kutenderera kwechiuno: kuyera denderedzwa rechiuno pachikamu chidiki chechiuno nemutongi akapfava
Hip circumference: kuyera denderedzwa rehudyu pachikamu chakazara chemagaro nerura rakapfava
Pima denderedzwa repamusoro pebust yechiyero chakapfava kutenderedza chikamu chakazara chezamu.
Yeresa denderedzwa rezasi rebust rerula rakapfava pazasi pezamu.
Size Bust Length Shoulder Strap Length Sleeve Length
S 33 28 10 /
M 35.5 30 11 /
L 38 32 12 /
Size Trousers Kureba Chiuno Circumference Hip Circumference Feet
S 80.5 55 68 18
M 83.5 59 59 19
L 85 63 76 20
Chikamu chepamusoro chakaiswa mataira saizi imwe-sided. Bust circumference, hem circumference, waist circumference uye saizi imwe yedenderedzwa inoda kuve X2. Chigadzirwa chakapedzwa chinoyerwa nemaoko (chikamu: CM). Iko kukanganisa ndeye 2CM (data ndeyereferensi chete. Kana uine mibvunzo, tapota taura nevatengi munguva)
Zvakapfuura: Kugadzirisa OEM yeEurope neAmerica isina Seamless Nyowani Muchinjikwa Yoga Sutu Yevakadzi Sutu Gradient Yakakwira-Waist Mitambo Yekusimba Yekunaka Kumashure Hollow Vest
Zvinotevera: Kugadzira OEM yeEurope neAmerica isina musono mitsva ine mitsetse isina musono kusimba yoga zvipfeko zvevakadzi-matatu-yakasimba-yakakodzera elastic hudyu-inosimudza mitambo yekusimba sutu.
Kugadzira OEM Seamless Knitted Mitambo Underwea...
Kugadzirisa uye kugadzirisa kwepamusoro nekukurumidza kuomesa ...
Kugadzira OEM yeEurope uye yeAmerica isina musono N...
Men's Running Fitness Shorts, Bodybuildin...
Yevakadzi Mitambo Yemitambo Yoga Sportswear Tig...
Kugadzirisa yakagadzirirwa OEM yemhando yepamusoro isina musono ...
FONI : +86 13857960811
ADDRESS : First Floor, Unit 4, Building 3, Xinyuan, Suxi Town, Yiwu Guta
Hot Yoga Pants Outfits, Black Shorts, Mens Wool Vests, Grey Yoga Pants Chipfeko, Sport Suit Men, Biker Shorts Vakadzi,